Mugovera, June 3, 2006 Mugovera, July 12, 2014 Douglas Karr
Chishanu chino, ndakave nerukudzo rwekupinda musangano nemamwe mafemu anomiririrwa zvakanaka uye vatungamiriri vemaindasitiri emuno kuti vashande nemaColts pane zvavanoenderera mberi kuita "Make it Personal" nevateveri vavo. Iri isangano rakanaka uye vanondiremekedza zvakanyanya. Vari kushandisa zvese zviwanikwa zvavanogona kuwana kuitira kusimudzira hukama nevateveri vavo, uye kuvaunza padyo nesangano sezvavanogona. Panzvimbo pekuumburukira mumuchina wemari, ndinonyatso kufanoona maColts achiva "Chikwata cheAmerica" ​​nekuda kwekutenda kwavo musangano, nekutenda kwevateveri vakashanda nesimba futi.
Kufambira mberi, ndiri kushanda nemamwe mafemu akati wandei kubatsira kubatanidza CRM yavo, Webhu, Webhu Analytics, Email, eCommerce, uye pamwe nemaitiketi masisitimu kuitira kuti maColts adzidze zvakawanda nezveumwe neumwe fan, taura navo pachezvako , uye vape iwo mikana yekukwira yetimu yavo yavanofarira sezvavasati vamboita kare.
Tags: AnalyticsCRMecommerceeIndianapolis coltszviite zvemunhuNFLchikwangwani
Rangu Wimpy Ganda paMyJonesSoda.com